Maamul goleedyada oo xiriirka u jaraya dowladda Soomaaliya
KISMAAYO, Soomaaliya - Hogaamiye-yaasha maamul goboleedyada ayaa qorsheynaya inay joojiyaan wadashaqeynta dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, xilli la filayo inay war-murtiyeed kasoo saaraan shirkooda Kismaayo.
Mas'uul sare oo ku sugan Kismaayo, oo magaciisa ka gaabsadey ayaa u sheegay Warsidaha Garowe Online in illaa Villa Somalia ay ka fuliso heshiisyadii hore ay joojiyanayaan xiriirka ay la leeyihiin.
Madaxda dowlad goboleedyada ayaa tan iyo Talaadadii lasoo dhaafey shir uga socdaa magaalada Kismaayo, iyagoo si aad ah khudbadahooda ugu dhaliilay hab-dhaqanka dowladda Federaalka.
Waxaa lagu wadaa in maanta Shirka Kismaayo laga soo saaro War-murtiyeed, kaasoo lagu shaacin doono inay maamul goboleedyada xiriirka u jareen dowladda uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo.
Tan iyo saanadkii 2017, waxaa sii xumaanayay xiriirka dowlad goboleedyada iyo Villa Somalia, oo lagu eedeeyay inaysan waxba ka fulin dhamaan heshiisyadii ay kuwada gaareen shirarkii dalka lagu qabtey.
Maxaa laga filayaa shirka Kismaayo? [WAREYSI]
Soomaliya 03.09.2018. 23:34
Keating oo ku sugan Kismaayo ayaa waxuu ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada...
Axmed Madoobe oo mid-mid u dul istaagey qaladaadka Villa Somalia
Soomaliya 04.09.2018. 17:08
Axmed Madoobe: Somalia ma ahan dal qof iyo laba xukumi karaan
Soomaliya 04.09.2018. 12:53
Maamul Goboleedyada oo hakiyey Wadashaqeynta DF [War-Murtiyeed]
War Saxaafaded 08.09.2018. 13:08
Go'aan ka dhan ah Wasaaradda Kalluumeysiga DF oo kasoo baxay Kismaayo
Soomaliya 18.07.2018. 12:37